Thor lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Terrible Thor avy amin'ny tontolo izao mba ho lasa anisan'ny ekipa ny Avengers. Izy no nitondra ny ody tantanana ka namely azy mihitsy. Tena matanjaka sy mahery, tsy misy indrafo ny fahavalo, ary namadika ny namany. Ny resaka rehetra momba izany ao amin'ny Internet Thor lalao ao izay hilalao foana ny maimaim-poana. Tantara Tsy Mety Resy milaza Lego Mpanao Torah sy ny toerana ny zavatra rehetra, na dia ny mahery fo izy, nivory avy amin'ny faritra. Nefa tsy hanelingelina Lego Torah manohy miady biby goavam-be sy ny ratsy nahay. Eo ny vola azo dia vonona ny maika ny mpikambana ekipa hafa mba handrava ny fahavalo ao amin'ny kiboriny tafika. Ary ny ady malaza indrindra sary dia aseho amin'ny piozila maro loko.
Lalao Thor tamin'ny Category:
Olona ny vy
Ny tsara indrindra Thor lalao
Lego: Ny Adventures ny Thor
Zavatra tsy zavatra: Ny Avengers
Avengers: Age ny Ultron
izay fara heriko Vs
Avengers taona Ultron Global Chaos
Tadiavo ny isa eo amin'ny sary miaraka amin'ny Avengers
Avengers - Tadiavo ny fahasamihafana
Mpandroba: Battles Thor Boss
Thor Ny Tafika Maneran-tany
ho fikotroky Arena
Thor izao tontolo izao ny haizina mba hahita ny taratasy
Thor: Tadiavo ny abidy
Avengers: niafina toerana
Free-tserasera Games Thor nasaina hiarina akaiky ny skandinavianina andriamanitra - mpikambana iray ao amin'ny Avengers ekipa ary afa-tsy ny tanàna avy Loki, maneho ny heriny rehetra
Lalao Online Rehetra Thor lalao
The Lehibe Tor
ato amin'ity fizarana ity ianao dia hahita lalao mahafinaritra indrindra Tor maimaim-poana izay miasa ny mpilalao fototra Norse andriamanitra, tantara an-tsary mahery fo ary iray amin'ireo ekipa Avengers – Thor. Izany no malaza indrindra sy miavaka toetra, izay mitana ao amin'ny laharan'ny ny vato ny fahefatra ambin'ny folo amby zato toerana ao amin'ny boky tantara an-tsary malaza eo amin'ny mpandray anjara. Ny endriny nampiasaina imbetsaka ao amin'ny andian-dahatsoratra, sarimihetsika, toy ny kilalao sy ny Logos. Izy no mitantana ny singa natiora ary manana fahaizana miavaka. Reny rehetra mitaraina any am-pitan'ny ny planeta; mandeha amin'ny alalan'ny fotoana; mampivelatra sverhskorost; mahita fifamoivoizana indrindra ny hafainganam-pandehan'ny hazavana. Dia saika tsy invulnerable mora ny aretina earthlings, manana ampahany tsimatimanota ny mazia, manasitrana ratra, ary na dia mitombo vatana vaovao, fa raha harodako ny tantanana Mjolnir, dia ho resy. Tany am-boalohany Thor avy Asgard sy ny zanak'i Odin sy Gaea. Izy no heverina ho iray amin'ireo tany matanjaka indrindra Asgard, ary tsy manan-tsahala ny fahaizany sy ny tsy fahafatesana dia amin'ny alalan'ny ny paoma volamena avy any amin'ny Saha Edena. Indraindray, nandritra ny ady, dia latsaka ao amin'ny toetry ny fahadalana, na Berserker Mpiady, izay mampitombo ny hery imbetsaka, fa izay nanaloka ny saina ary avy eo dia afaka hanafika ny olona rehetra, na dia ny. Tamin'ny fotoana toy izany, dia tsy dia mila sakafo, ny rano ary ny fialam-boly – Sivy volana tatỳ aoriana, dia afaka miady ranomandry goavana nisesy. Ao amin'ny hery nahatonga ny loza voajanahary ho an'ny eo an-toerana sy eran, mampiasa ny kanonta. Fa raha ny tranga nateraky ny mazia, dia tsy afa-manoatra izy. Jereo ny ady fahaiza-manao ny mahery fo ny lalao Thor
Games Thor2 mampahatsiahy anao indray fa tena ny mahery fo lehibe ny mpiady. Dia mandentika ny fahavalo mba hanolotra tanana sy tsara mihazona ny tantanana, sabatra, Mace sy famaky. Fehin-kibo Force sy tantanana Mjolnir – Roa gizmos tsy mahagaga izay tsy afaka manao. Amin'ny fehin-kibo avo roa heny ny heriny, ary ny fampiasana ny tantanana, dia manidina, manara-maso toetrandro, skilfully mametraka ny angovo sakana, ary tsy mankeny ny ara-tsaina fanafihana, tao amin'ny izao tontolo izao ny lavitra, ary koa ny manampy ny mampiasa ny famantarana kapoka: mafana fahatairana, fiantraikany sy ny anti-mivadi ny andriamanitra. Manipy ny tantanana mandroso sy mitazona fehin-kibo hoditra, Thor Mjolnir manidina eo ambonin'ny tany ny atmosfera, fampandrosoana ny hafainganam-pandeha indrindra fahazavana.
Ao amin'ny Torah misy ody kalesy tarihin-ny mpivady ny mahagaga osy, izay afaka hitondra ny maherifo sy ny namana. Ny heriny dia ampy ny hanipy zavatra eny amin'ny habakabaka, ary raha toa ka hanipy tantanana teny an Asgard, dia hiverina amin'ny tompony. Olo-mahery mifono zava-miafina izany dia afaka mankafy ny tsy manam-petra, ary ny fahaizany hianatra tsy miankina, dia manolotra anareo lalao Thor, izay no niady tamin'ny fahavalon'ny amin'ny herim-po sy ny mahery. Esory aminy eny amin'ny lanitra sy ho hita taratra fahavalo ny fanafihana any amin'ny faritry ny lanitra, miezaka, fa tsy tafiditra any amin'ny tany, izay afaka manafina sy mamafy ny voan'ny ratsy hahamarika. Ary rehefa nidina ny lohany, ny asa, ary hisy betsaka.
Ny mpanohitra dia ho:
Ary ny demonia sy ny trolls,
rehetra fanafihana, nitondra fitaovam-piadiana sy ny hery manokana. Fa ny Thor efa tsara isaky ny solontenan'ny ny ratsy sy mahita azy Synedriona. Koa satria Thor dia ampahany amin'ny The Avengers, miaraka Iron Man, Cyclops, Spider-Man, Moulmenom, Ramatoa Marvel, Modoc sy Dokotera faharatsianao, dia ho voaro amin'ny hery ho nanafika tilikambo. Ny fahafantarana ny herin'ny mpandray anjara tsirairay, aoka hapetraka ao amin'ny paritra fa izy ireo dia nihaona na iza na iza encroached eo amin'ny faritaniny. Ny gameplay Thor fanjakan'ny maizina, dia hahafaly mpankafy ny sarimihetsika mikasika ny Torah. Ary olo-mahery miady amin'ny biby goavam-be any Asgard, mandalo maro asa fitoriana. Na dia ny marina lalao tsy misy sarimihetsika ho mpanohitra sy ny mpiara-dia aminy dia mitovy.